Kubudirira Kwemagariro Kunoita Basa Rokushanda DVD Kutenga kubva kuBlackbody
Slim mu6 inowanzo 4 mari ye $ 19.95. Kwenguva shoma chete, iwe unobhadhara chete 2 kubhadhara kwemwedzi kwe $ 19.95
Slim mu6 inonyanya kukubatsira mukurasikirwa nehutano pane avo vane simba-refu, maitiro makuru ekushanda. Chakavanzika ndechokuti Debbie's Slim Training, kusanganisa kwemaodzora-cardio kufamba uye kukurumidza kutsva kunokuita iwe munzvimbo yakakwana ye-fat-burning zone-uye inokuchengetedza ipapo. Mafuta anonyunguduka sezvo iwe unotenderera uine mutsvuku, saka unowana zviitiko zvinoshamisa zvekuumba muviri, nekukurumidza!
Dzvanya pano kuti Reshape Mutumbi wako muZvondo dze6- Wakavimbiswa ne "Slim mu6" Dhiyabhorosi ekudzidzira!
Shinda midsection yako, tora zvishoma zvidye, mahudyu nemaoko mumasvondo e6 chete neSlim mu6 workout dvd set. - Click Here Kutenga Slim mu 6 nhasi nokuda kwe50% kubva kwekanguva chine nguva chete
Slim mu6 50% Kubviswa Kutengeswa kwakajeka sekwa 10 / 28 / 13 3: 06 AM EST. Mitengo yakarurama seyenguva / zuva yakanyorwa uye inogona kuchinja